Ciidammada ammaanka Ex-Koontarool Afgooye oo gacanta dhiggay nin watay Jaakad lagu soo xeray walxaha qarxa
Ciidammada dowladda Soomaaliya ee ku sugan Ex-Koontarool Afgooye ayaa gacanta ku dhiggay nin sitay walxaha qarxa, kaasi oo ka tirsanaa malleeshiyaadka Al-Qaacidda oo doonayay in weerar naftii halignimo ah uu ka fuliyo xarunta ay ku sugan degan yihiin ciidammada dowladda iyo AMISOM.
Taliyaha ciidammada ammaanka ee Ex-Koontarool Afgooye Axmed Cabdullaahi ayaa Radio Muqdisho u sheegay in ninka ay ciidammada ammaanka gacanta ku dhiggeen in uu watay Jaakad ay ku xiran yihiin Walxaha qarxa, isla markaana uu doonayay in uu gudaha u galo xarun ay ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidammada AMISOM degan yihiin.
Waxa uu tilmaamay in ciidammada amniga ay war helleen ninkaasi laba maalin in uu ku soo jeedo magaalada Muqdisho, maadaama qaraxaasi lagu soo diyaariyay deegaannada loo barakacay, isagoo xusay in xarunta Jaamacadda Umadda uu doonayay in uu isku qarxiyo, basle awoodda Alle kaddib ay ku guulleysteen ciidammada amniga.
Axmed Cabdullaahi ayaa carrab ku dhuftay in ninkaasi dhagar qabaha ee ay gacanta ku dhiggeen qabashadiisa ay kala shaqeeyeen shacabka Soomaaliyeed ee Nabad Jecel, haddana uu ku jiro gacanta ciidammada amiga, saacaddaha soo socdana ay warbaahinta u soo bandhiggayaan.
Ugu dambeyntii ayuu sheegay taliyaha ciidammada Ex-Koortarool Afgooye ayaa tilmaamay in hey’adda Nabad Sugidda ay ku wareejinayaan si ninkaasi loo marsiiyo waajibkiisa, waxa uu intaa raaciyay in qorshayaasha kale ee Al-Qaacidda damacsan tahayna ay sidaas oo kale u fashilinayaan.